မိုဘိုင်းကိုတီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | မိုဘိုင်း, တီဗီများ
စျေးကွက်သို့တက်ဘလက်များရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်ဖုန်းများသည်အစ်ကိုဖြစ်သူ၏တက်ဘလက်အငယ်၏အခန်းကဏ္adopကိုလက်ခံလာခြင်းကြောင့်လက်မ ၆ လက်မအထိမြင်ကွင်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အတွက်များစွာသောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကို သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်ကတစ်ဆင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုစားသုံးပါ။
ဒါကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောဖို့အပြစ်ရှိတာကို developer များကပြုလုပ်သည်။ developer များကသာမန်အသုံးပြုသူမည်သည့်ကွန်ပျူတာနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းအပါအ ၀ င်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌လက်ရှိသင်ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများကိုသင်ပြပါလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းကို TV နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောဂူဂဲလ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအပလီကေးရှင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များသို့ဝင်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်းသောသူများမှအပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းအရာမဆိုအမျိုးအစားမျိုးပွားရန်ခွင့်ပြုပါ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုဘဲ၎င်းတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အရာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုစွန့်ခွာရန်စျေးကွက်ထဲရှိဖြစ်နိုင်ခြေများကိုမြင်တွေ့ရသောကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားသင်ရရှိနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုပြသပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းကိုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ချိတ်ဆက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၏ကြီးမားသောဖန်သားပြင်တွင်ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်အချို့ကိုရှင်းပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောအားလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေများမပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 Miracast ဆိုတာဘာလဲ
2 AllShare Cast ဆိုတာဘာလဲ
3 DLNA ဆိုတာဘာလဲ
4 Airplay ဆိုတာဘာလဲ
5 Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကိုကေဘယ်တီဗီနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
5.1 HDMI ဆက်သွယ်မှု
5.2 MHL ဆက်သွယ်မှု
5.3 Slimport ဆက်သွယ်မှု
6 Android စမတ်ဖုန်းကို TV နဲ့ကြိုးနဲ့မချိတ်ပါနဲ့
6.2 တီဗီ Box ကို
7 iPhone ကို TV နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
7.1 HDMI cable ကိုမှလျှပ်စီး
7.2 Apple က TV ကို
Miracast ကကျွန်တော်တို့ကိုဝေမျှခွင့်ပေးတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၏ desktop မျက်နှာပြင်ကို TV ပေါ်မျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ပါ ဥပမာအားဖြင့်ဂိမ်းများ (သို့) ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားတွင်ကြည့်ချင်သော application တစ်ခု။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ကအဲဒါကိုငါတို့သိမ်းထားတဲ့ဗွီဒီယိုနဲ့အသံတွေကိုဖွင့်ဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြtheနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကရုပ်မြင်သံကြားမှာပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အချက်ပြမှုဖြစ်လို့ပဲ။
Miracast သည် WiFi Direct ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနည်းပညာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Android 4.2 ထက်ပိုမြင့်တဲ့စမတ်ဖုန်းရှိရင်စမတ်ဖုန်းရဲ့ Desktop ကိုကေဘယ်ကြိုးတွေမသုံးဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကိုပို့ဖို့ပြproblemနာမရှိဘူး။
AllShare Cast ဆိုတာဘာလဲ
ထုံးစံအတိုင်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး စီအတွက်အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုရှိသည် အချို့သော protocols များအမည်ပြောင်းပါ ၎င်း၏ဖန်တီးမှု၏တန်ရာယူဖို့ကြိုးစားရန်။ AllShare Cast သည် Miracast နှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်တွင် AllShare Cast ရုပ်မြင်သံကြားရှိပါက Wifi Direct နှင့်အတူတူပင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်လူသိအများဆုံး protocol များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ protocol ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုနှင့်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပါမသက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်သူ၏။ DLNA ကိုစမတ်တီဗီများစွာတွင်သာမကစမတ်ဖုန်းများ၊ Blu-ray ကစားစက်များ၊ ကွန်ပျူတာများတွင်လည်းရရှိနိုင်သည်။ မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်။
Samsung လိုပဲ Apple မှာလည်းအဲဒီလိုပဲ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို "တီထွင်" ရန်အလွန်အရေးကြီးသည် ဒီအမျိုးအစား AirPlay ကိုခေါ်။ AirPlay က DLNA နည်းပညာကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်တူညီသော်လည်းကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် iPhone, iPad နှင့် iPod touch နှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။
ဒီနည်းပညာကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးခုနစ်နှစ်အကြာမှာတော့ ၂၀၁၇ မှာ Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီကသူတို့ကို AirPlay 2010 လို့ခေါ်တယ်။ အကြောင်းအရာကိုလွတ်လပ်စွာကစားပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိအမျိုးမျိုးသောစက်ကိရိယာများ၊ အသံဗီဒီယိုပုံစံဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ဤနည်းပညာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ် Blu-ray player ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အားသာချက်များကိုရယူရန်အတွက် Apple TV ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရန်လိုသည်။ ဒီနည်းပညာရည်ရွယ်ထားတဲ့များအတွက် device ကို။
Android operating system ကိုများစွာသောထုတ်လုပ်သူများထံမှရရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်း၏အကြောင်းအရာများကိုတီဗွီနှင့်ဝေမျှနိုင်သည့်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သတိရပါ ထုတ်လုပ်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဒီရွေးချယ်မှုကိုမပေးပါဘူးအထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများတွင်ယခုအချိန်အတန်ကြာသော်လည်းဤရွေးချယ်မှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
HDMI ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ကိရိယာအရေအတွက်သည်သိပ်မများသော်လည်းဈေးကွက်ထဲတွင်ဤဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားနှင့်အတူထူးဆန်းသော terminal ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ ရိုးရိုးကေဘယ်လ်ကြိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုတီဗီနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတယ် ပြီးတော့ငါတို့အိမ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးမှာစားပွဲ၊ ဂိမ်းနဲ့ရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ကြည့်။
ဒီဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစား ၎င်းကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထုတ်လုပ်သူများကအများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည် MHL နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် USB ကြိုးကိုတစ်ဖက်နှင့် HDMI ကိုအခြားတစ်ဖက်တွင်ချိတ်ဆက်ရုံသာဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းအားသွင်းစက်ကိုကေဘယ်လ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရမည်၊ သို့မှသာ၎င်းသည်ဖန်သားပြင်နှင့်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ပေးပို့ရန်လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒီစနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတီဗွီမှာစမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုပြသပြီးကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်မှာဂိမ်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကိုခံစားခွင့်ပေးတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစမတ်ဖုန်းအားလုံးသည်ဤနည်းပညာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကေဘယ်ကြိုးနှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီတွင်အချက်ပြမထားပါကဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ကို ထပ်၍ ပြုလုပ်၍ မရပါ ရုပ်မြင်သံကြားမှာအနည်းဆုံးကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်။ MHL cable တစ်ခုသည်စျေးနှုန်း ၁၀ ယူရိုရှိပြီးမည်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ပျူတာဆိုင်တွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်။
Sony နှင့် Samsung တို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများတွင်ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားကိုပေးသောအဓိကထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည် သင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ် သငျသညျမကြာမီကသက်တမ်းတိုးရန်စီစဉ်နှင့်ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုချင်လျှင်။
ထုတ်လုပ်သူများကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မှုများကိုစံသတ်မှတ်ထားသည့်အလေ့အကျင့်ရှိပြီး Slimport သည် MHL မှတဆင့်လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသောကြောင့်အာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခြားကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စျေး ၃၀ ယူရိုနီးပါးရှိတယ်။ MHL ဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြားခြားနားချက်မှာမိုဘိုင်းအားသွင်းစက်အားကေဘယ်လ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤစနစ်ကိုရွေးချယ်သောအဓိကထုတ်လုပ်သူများမှာ BlackBerry, LG, Google, ZTE, Asus ...
Android စမတ်ဖုန်းကို TV နဲ့ကြိုးနဲ့မချိတ်ပါနဲ့
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့ကေဘယ်ကြိုးများမသုံးဘဲပေးပို့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည် Google ကသဟဇာတထုတ်ကုန် CastAndroid နှင့်လိုက်ဖက်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြား၏ HDMI port နှင့်ဆက်သွယ်သောဗွီဒီယိုများကိုမျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်တွင်ခံစားနိုင်သောစက်အသေးစားတစ်ခုသို့ပို့လွှတ်နိုင်စေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အထက်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကေဘယ်များမှတစ်ဆင့်လုပ်နိုင်သကဲ့သို့ desktop တစ်ခုလုံးကိုရုပ်မြင်သံကြားသို့ပေးပို့ရန်ခွင့်မပြုပါ။
မျိုးပွားခြင်းပြproblemsနာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံလောက်သောအာမခံချက်များပေးထားသည့်ဤစက်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေနေပါက၊ ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ Google ၏ Chromecast ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြား၏ HDMI ဆိပ်ကမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြား၌ဖွင့်ရန်ဗွီဒီယိုများနှင့်တေးဂီတများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့နိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခု။
တီဗီ Box ကို
ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Cast နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သော Android မှစီမံသောအခြားကိရိယာများကိုတွေ့နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဂိမ်းကစားရန်ခွင့်ပြုပါ ၎င်းကိုစမတ်ဖုန်းတစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဆင်ထားသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောမည်သည့်အရာကိုသင်ကြည့်လိုပါကထိုဆောင်းပါးကိုလေ့လာနိုင်ပါသည် ဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက် Android နှင့် TV Box ငါးခု.
iPhone ကို TV နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
Apple သည်၎င်း၏ devices များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုအားသွင်းရန်ကြိုးတွေ (pins ၃၀ နှင့်ယခု Lightning) မှအခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေး protocol များအစဉ်အမြဲထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်လူသိများသည် လူသိများသည်မှာ Bluetooth ဆက်သွယ်မှုရှိသော်လည်း iPhone မှတဆင့်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဖိုင်ကိုမျှ Bluetooth မှတဆင့်မပို့နိုင်ပါ။ အိုင်ဖုန်းမဟုတ်ရင်
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည့်အဖြစ်အပျက်အတွက် Apple သည်၎င်းကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းရန်ပြန်လာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone ၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင်ပြသရန်လိုပါကသေတ္တာကို ဖြတ်၍ Apple TV ကိုရယူရန် မှလွဲ၍ အခြားရွေးစရာမရှိတော့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာကေဘယ်ကြိုးကိုကောင်းစွာကိုင်ထားပါ။ အတိအကျစျေးပေါမဟုတ်သော cable ကို။ ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရှေးခယျြစရာမြားမရှိပါ။
HDMI cable ကိုမှလျှပ်စီး
ရုပ်မြင်သံကြား၌ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်သို့မဟုတ်အိုင်ပေါ့ဒ်တို့ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြရန်အသက်သာဆုံးနည်းကို Lightning to HDMI cable တွင်တွေ့ရသည်။ Desktop အပါအ ၀ င်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ interface ကိုပြလိမ့်မယ် ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ပေါ်မှာငါတို့ကိရိယာ၏။ လျှပ်စီး AV ဒစ်ဂျစ်တယ် connector ကို adapter ။ ဒီ adapter ကို ၅၉ ယူရိုနဲ့စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့တီဗီမှာဖွင့်နေစဉ်မှာဖုန်းကိုအားသွင်းနိုင်မှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားတွင် HDMI ဆက်သွယ်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည် VGA adapter ကိုရန်လျှပ်စီး, ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ device ကို VGA input နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်မော်နီတာမှ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် HDMI adapter ၏ဖြစ်ရပ်နှင့်တူသောအသံသည်တီဗီမှမဟုတ်ဘဲကိရိယာမှတစ်ဆင့်ကူးယူသွားမည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
Apple က TV ကို
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ ၄ င်း၏4မျိုးဆက်မော်ဒယ်နှင့်စတင်သော Apple TV ကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အက်ပဲလ်သည်ရောင်းရန်ကျန်သေးသည့်ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစက်သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်၏ပါဝင်မှုကိုတီဗွီတွင်ပြသရန်လည်းခွင့်ပြုသည် အကြောင်းအရာများကို Apple TV သို့တိုက်ရိုက်ထင်ဟပ်ခြင်း၊ ဒါဟာဂီတလား၊ စတုတ္ထမျိုးဆက် Apple TV နှင့်သိုလှောင်မှု 4GB စျေးကတော့ ၁၅၉ ယူရိုရှိပါတယ်. Apple TV 4k ၃၂ GB ကို ၁၉၉ ယူရိုနှင့် ၆၄ GB မော်ဒယ် ၂၁၉ ယူရိုရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » တီဗီများ » တယ်လီဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းကိုချိတ်ဆက်ပါ
ကင်မရာကောင်းကောင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောမိုဘိုင်းဖုန်း Wiko UPulse ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်